ကား ဝိုက်ဘာရေဘူး ထဲကို ရိုးရိုးရေ ထည့်ပီး အသုံးပြု သင့်သလား? Washer Fluid လို့ခေါ်တဲ့ ဝိုက်ဘာ အရည် ထည့်သုံးသင့်သလား… – Nyi Ma Lay
ကား ဝိုက်ဘာရေဘူး ထဲကို ရိုးရိုးရေ ထည့်ပီး အသုံးပြု သင့်သလား? Washer Fluid လို့ခေါ်တဲ့ ဝိုက်ဘာ အရည် ထည့်သုံးသင့်သလား…
ကားရဲ့ ရှေ့/နောက် မှန်တွေကို သန့်စ င်စေဖို့ အတွက် အသုံးပြုရတဲ့ ဝိုက်ဘာရေ ဘူးထဲကို ရိုးရိုးရေ ထည့်သွ င်းအသုံးြ ပုတာနဲ့ Washer Fluid လို့ခေါ်တဲ့ ဝိုက်ဘာ အရည်သုံး တာဟာ ကြီးကြီးမားမား ကွာခြားချက်ေ တာ့ မရှိပါဘူး။
အပူချိန် ရေခဲမှတ်အ ထိကျသွား တတ်တဲ့ နိုင်ငံေ တွမှာဆိုရင်တော့ ဝိုက်ဘာရေဘူးနဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေ ထဲက ရေတွေအေး ခဲသွားတ တ်တာကြောင့် Antifreeze နဲ့ Alcohol ပါဝင်တဲ့ Washer Fluid တွေကို မဖြစ်မနေအ သုံးပြုကြ ရပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံလို အပူချိန်မြင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာကတော့ ရိုးရိုးရေအသုံးြ ပုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဝိုက်ဘာရေ ဘူးထဲကို ရိုးရိုးရေထည့်သွ င်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရ င်တော့…
လေကာမှန်ေ တွမှာ ငှက်ချေးလိုမျိုး အညစ်အကြေးတွေ တင်နေလို့ ဖျန်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အရမ်းမပြောင်နိုင်ခြင်း
ရိုးရိုးရေဖြ စ်တဲ့အတွ က် ဖျန်းပြီး ရေစင်အော င်ပြန်မ သုတ်မိရင် မှန်မှာ ရေဂျိုးကွက်တွေစွဲသွားခြင်း
သောက်ရေသန့် မဟုတ်ဘဲ ဘုံဘိုင်ရေထ ည့်မိရင် ရေဆိုးမှာ ပါဝင်တဲ့ အနည်တွေနဲ့ ထုံးဓါတ်တွေေ ကြာင့် ဝိုက်ဘာရေ ပန်းသီးရဲ့ နော်ဇယ်ပိ တ်တတ်ခြင်း
အစရှိတဲ့ ပြဿနာေ လးတွေတော့ ကြုံတွေ့ရတတ် ပါ တယ်။ အဆိုပါ ပြဿနာေ တွကလွဲရင်တော့ အခြားကြီးကြီးမားမား ပြဿနာမျိုးတွေ ကြုံေ တွရတာမျိုး မရှိတတ်ပါဘူး။
ကားရဲ့ ေရွ႕/ေနာက္ မွန္ေတြကို သန႔္စ င္ေစဖို႔ အတြက္ အသုံးျပဳရတဲ့ ဝိုက္ဘာေရ ဘူးထဲကို ရိုးရိုးေရ ထည့္သြ င္းအသုံးျ ပုတာနဲ႔ Washer Fluid လို႔ေခၚတဲ့ ဝိုက္ဘာ အရည္သုံး တာဟာ ႀကီးႀကီးမားမား ကြာျခားခ်က္ေ တာ့ မရွိပါဘူး။
အပူခ်ိန္ ေရခဲမွတ္အ ထိက်သြား တတ္တဲ့ နိုင္ငံေ တြမွာဆိုရင္ေတာ့ ဝိုက္ဘာေရဘူးနဲ႔ ပိုက္လိုင္းေတြ ထဲက ေရေတြေအး ခဲသြားတ တ္တာေၾကာင့္ Antifreeze နဲ႔ Alcohol ပါဝင္တဲ့ Washer Fluid ေတြကို မျဖစ္မေနအ သုံးျပဳၾက ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံလို အပူခ်ိန္ျမင့္တဲ့ နိုင္ငံေတြ မွာကေတာ့ ရိုးရိုးေရအသုံးျ ပုရင္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ ဝိုက္ဘာေရ ဘူးထဲကို ရိုးရိုးေရထည့္သြ င္းအသုံးျပဳမယ္ဆိုရ င္ေတာ့…
ေလကာမွန္ေ တြမွာ ငွက္ေခ်းလိုမ်ိဳး အညစ္အေၾကးေတြ တင္ေနလို႔ ဖ်န္းတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ အရမ္းမေျပာင္နိုင္ျခင္း
ရိုးရိုးေရၿဖ စ္တဲ့အတြ က္ ဖ်န္းၿပီး ေရစင္ေအာ င္ျပန္မ သုတ္မိရင္ မွန္မွာ ေရဂ်ိဳးကြက္ေတြစြဲသြားျခင္း
ေသာက္ေရသန႔္ မဟုတ္ဘဲ ဘုံဘိုင္ေရထ ည့္မိရင္ ေရဆိုးမွာ ပါဝင္တဲ့ အနည္ေတြနဲ႔ ထုံးဓါတ္ေတြေ ၾကာင့္ ဝိုက္ဘာေရ ပန္းသီးရဲ့ ေနာ္ဇယ္ပိ တ္တတ္ျခင္း
အစရွိတဲ့ ျပႆနာေ လးေတြေတာ့ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ ပါ တယ္။ အဆိုပါ ျပႆနာေ တြကလြဲရင္ေတာ့ အျခားႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာမ်ိဳးေတြ ၾကဳံေ တြရတာမ်ိဳး မရွိတတ္ပါဘူး။
Previous post သင့်အိမ် သင့်ခြံ ထဲမှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေသော ကျွတ်နှင့်ခြ များကို ထွက်ပြေးစေသော နည်းလမ်း
Next post ခုလိုအချိန်မှာ ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့ ကားဝယ်မယ်ဆို ဒီ အချက်တွေကို သေချာစစ်ပါ